Ngokuqinisekileyo, usuku lokuqala luhlala luvuyisa kakhulu, kwaye ngokukodwa xa kuthethwa kumntu onomdla okhethekileyo. Abantu abaninzi banenkxalabo malunga nombuzo wento yokugqoka ngomhla wokuqala? Emva koko uqala ukugqithisa ngokugqithiseleyo kwiidrobe zakho, uzame kwiingubo ezahlukeneyo phambi kwesibuko. Ukuze uqonde oko kukulungele ukumbatha umfazi ngosuku lokuqala, okokuqala kuya kuba kuhle ukuqonda ngokuchanekileyo ngomlinganiselo wemibala.
Nguwuphi umbala umbala wokuqala wokuqala?
Umbala obomvu. Akuyi kulungiswa ngokupheleleyo ukuba anganiki ngenxa yembala ekhangelelana ngesondo kwisimo sethu sobomi obuhlukeneyo. Kulo mntu, umbala obomvu ufana nenkunzi! Ubuncinane, indoda iyayiqonda indlela enomdla ngayo. Kungathiwa indoda ephuma kumfazi ifumana uphawu malunga nokuba kunokwenzeka ukuba yinto ekhuseleyo yecala layo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba, ukuqala ubudlelwane obude kunye obunzulu, umbala obomvu, okwenene, awuyi kulungele ngokupheleleyo, kwaye unokukwazi ukukhawuleza izinto. Ngoko ke, ibhinqa kufuneka likhethe imbobo ebomvu ngomhla, kodwa kwiimithunzi ezininzi ezingamanzi, umzekelo, i-burgundy okanye i-coral.
Umbala we-Orange, njengomthetho, umbala oqaqambileyo kwaye ukhangelekile, nangona kunjalo, xa kusetyenziswe olunye umfazi uya kubonakala eqaqambileyo ngasemva, njengoko besithi, i-gray gray. Ukuba ibhinqa liza kugqoka ingubo, ingubo, ngokusekelwe kumbala we-orange, kufuneka uzame ukuyinciphisa ngokungahambisani nokungathathi kwamanye amazwe, okanye emva kokuba imizuzu yokuqala engamashumi amabini yeqabane layo sele iqalise ukugubungela emehlweni akhe.
Iipinki - umbala wezilwanyana kuphela - ngokungathandabuzekiyo isimboli sokuthandana, into ephawulekayo yokudala umfanekiso wesantombazana esincinci, ukukhupha umbono wakhe ngokukhawuleza wehlabathi. Nangona kunjalo, ukuba ufuna umntu ukuba enze ingcamango enkulu, kunye nomfazi othembekileyo, umbala we-torus ungonakalisa umfanekiso wakho ncinane.
Ingubo emhlophe imhlophe, imbala "ecocekileyo" kakhulu. Ngehlobo elitshisayo, iingubo ezimhlophe kunye nezinye izongezo ezincinane zemibala ziya kuhambelana ngokupheleleyo. Kodwa kubalulekile ukuba uqaphele malunga nombala onjalo, ukuba asikho ihlobo esitratweni. Umbala omhlophe wabantu abaninzi unxulumene neentlanganiso eziqinileyo kunye nezoshishino, ngoko akunakwenzeka ukuba olu khetho lufanelekile kumoya wothando.
Umbala ohlaza - ngokwawo uhamba ngamandla kuphela, ukudala udibaniselwano kunye nobudlelwane. Eyona nto ibaluleke kakhulu imibala elula yokuhlaza, eyongeza into yokukhanya.
Impahla yabasetyhini yombala i-violet iyahlula ngokucocwa kwayo, kunye nekhontrakthi. Umbala onjalo unokuvelisa ingcamango engaqondakaliyo, engakukhunjulwayo kwi-satellites yakho. Le ngubo iyinxalenye yokuphumelela.
I-Blue, njengamanye amaninzi omnyama, ngokuqhelekileyo idibaniswa nobunzulu. Nangona kunjalo, umbala obomvu awukwazi ukuchasiswa ngobuhle, ukungahambelani akunakwenzeka, kwaye amadoda amaninzi ayawaxabisa ezi mpawu. Umbala obomvu udla ngokuqhagamshelana nophuhliso oluphezulu lwengqondo, kwaye luyakwazi nokudlala isandla somfazi.
Umbala omnyama ngumbala obunobunzima, kodwa kuyafaneleka ukuba uqaphele ukuba akuyikukhutshwa nayiphi na imfihlakalo. Umbala omnyama ngokugqithisileyo awuyiyo, kodwa ezinye izinto ezifanayo emfanekisweni wakho ziza kwengeza kuphela isitayela.
Ngoku siza kuqwalasela ukuba akufuneki ukuba umfazi ugqoke okokuqala. Uluphuzi (ecasulayo, ngaphandle koko, luyimfihlo kwaye alufanelekanga), imvi, kunye nombala obomdaka - imbala enzima kakhulu, ibonisa ukunyanzelisa.
Izifundo ngesimbo nomfanekiso
Ziziphi iimpahla abafazi abahamba ngayo?
Owesifazane opheleleyo unokugqoka njani kakuhle?
Izambatho ezintle zamadoda
Indlela yokubopha intambo yentambo
Ziziphi iimpahla ezifanelekileyo zokugibela
Isitayela seBhoho sokugqiba
U-Anna Sedokova kunye nePig Pig babela ukuthandwa
Ubuso obuhle kunye nentamo
I-aluminium yokupanda kunye neepanki: indlela yokucoca nokutshisa?
Indlela yokudweba inja kwisinyathelo sepenisi ngesinyathelo
Isondlo esifanelekileyo somama ngexesha lokukhulelwa, zokupheka
Amancinci amancinci amabhinqa ebusweni obuninzi
Umculi uMaxim, umzobo
Kutheni amadoda ethanda ukubuyela kumandulo?
Risotto nge mascarpone
Ikhalenda yokukhulelwa: iiveki ezingama-30
I-Tart ne-coconut cream
Iingxabano zezingane kunye nezindlela zokuzisombulula
I-Courgettes kunye neetamatati kunye negalikhi